Home News Qarax Gaari Oo Ka Dhacay Degmada Hodan
Qarax Gaari Oo Ka Dhacay Degmada Hodan
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax gaari oo fiidnimadii caawa ka dhacay xaafada Taleex ee degmada Hodan, qaraxan ayaa si weyn looga maqlay qaar ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir.
Qaraxan oo ka dhashay gaari nuuca raaxada ah, islamarkaana lagu soo xiray Miinada nuuca dhejiska ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay dalcadda Taleex, meel ku dhaw carwadii hore.
Dadka degaanka ayaa soo tabiyay gaariga qarxay inay saarnaayeen laba ruux oo ilaa hadda aanan la ogeyn waxa ay ahaayeen, kuwaasi oo dhaawac uu soo gaaray.
Warar kale oo aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan dadka qaraxan ku dhaawacmay inay ahaayeen laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda gaar ahaan Millatariga.
Dhaawacyadan dadkan ayaa waxaa loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla Muqdisho, waxaana la soo warinayaa in Hal qof uu dhaawiciisu daran yahay.
Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya ayaa tagay goobta, waxayna xayireen isu socodka wadadaasi, iyaga oo halkaasi ka sameeyay baaritaano, intaasi kadib ayay dib u fureen wadada.
Previous articleDowladda Soomaaliya Oo Ugu Baaqday Hey’addaha Ka Howlagala Gudaha Dalka Ee Fadhigoodu Yahay Kenya Iney Xarumahooda U Sooraraan Magaalada Muqdisho
Next articleWar Deg Deg ah:-Wasiir ka Tirsan Xukumada Kheeyre oo Saacadaha soo Socda Iscasilaayo(Ogoow Sababta)